I-Shangri-la Blinds Fabric Manufacturers & Suppliers - I-China Shangri-la Blinds Fabric Factory
Indwangu Eqinile ye-Shangri-La Blind Semi-blackout
I-Shangri-La blinds iwumklamo omusha sha ohlanganisa amakhethini kagesi, izikrini zamafasitela, ama-venetian blinds nama-roller blinds. Impilo yesevisi yendwangu ye-Shangri-La blinds yinde kakhulu, imelana nokushisa okuphezulu nokubanda okuphansi ngenxa yezimfanelo zayo. Ngokuyisisekelo, inkinga yokuphila kwenkonzo encishisiwe ngenxa yokushisa okuphansi ayenzeki ezindaweni ezinamahora amade okukhanya kwelanga noma izinga lokushisa eliphansi lasebusika. Ngale ndlela, impilo yesevisi ye-Shangri-La inwetshwa kakhulu.
Uma indawo yasendlini inhle kakhulu, ngaphezu kokuwa nokuhlanza nsuku zonke kothuli oluncane kwendwangu, ingakwazi ukufeza umphumela weminyaka engaphezu kwe-10 yokusetshenziswa.
I-Factory Hot Sell Indwangu ye-Shangri-La Sheer Blinds 100% Polyester
Ukuphila kuyaphumelela kodwa kunomsindo, futhi udinga njalo ukuzola nokuthula. Izimpumputhe zikanokusho zihlukanisa izwe langaphandle ngobumnene, zishiya isikhala esikhethekile senhliziyo. Umkhathi, izinga lokushisa, nokukhanya kwendawo yokuhlala kuzoshintsha ngokufanele, futhi ukuphila kufanele kube nokuzenzela nje. Inqubo kanye nomklamo wamakhethini amnyama acebile futhi ahlukahlukene. I-Shangri-La sheer blind iwuhlobo lwakudala kakhulu. Indwangu ye-Groupeve Shangri-La sheer blinds ithambile njengosilika, inhle njengentambo.
Umhlobiso Wasekhaya Ovundlile we-Shangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
I-Shangri-La blinds iwumklamo omusha sha ohlanganisa amakhethini kagesi, izikrini zamafasitela, ama-venetian blinds nama-roller blinds. Izimpumputhe ze-Shangri-La ziyisinqumo esingcono kakhulu sokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Isetshenziswa kabanzi kuma-villas, izakhiwo zamahhovisi, amathilomu, izindawo zokudlela, amahhotela nezinye izindawo. Indwangu ye-Shangri-La blinds inesakhiwo esinezingqimba ezintathu, esenziwe ngezindwangu ezimbili zokudlulisa ukukhanya ezihlelwe ngokuqondile ezixhunywe ezingqimbeni eziningi zezindwangu ezivikela ukukhanya emabangeni alinganayo.
Indwangu ye-Groeve shangri-La blinds ihlukile ngokuthungwa futhi inhle ngokubukeka eyenziwe nge-polyester engu-100%. Ukuxhuma izindwangu ezivundlile phakathi kwezingqimba ezimbili zezindwangu ezingenalutho kungagcina igumbi lithambile. Vula i-blade ukuze ulungise ukushuba kokukhanya. Indwangu eyingqayizivele ye-shangri-La blinds ingagcina umbala ungaguquki isikhathi eside. Ukufiphaza okuqinile. Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kwezindwangu kungasetshenziswa ukwenza izindwangu zibukeke zikhanya njengezintsha.
I-Design yesimanje Roller Izimpumputhe Shangri-la Zebra Indwangu Yasekhaya
I-Shangri-La zebra blinds iwumklamo omusha sha ohlanganisa amakhethini kagesi, izikrini zamafasitela, ama-venetian blinds nama-roller blinds. Izimpumputhe ze-Shangri-La ziyisinqumo esingcono kakhulu sokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo.
Indwangu ye-Groeve Shangri-La eyimpumputhe ngeke ibe nezinkinga ze-gluing, yellowing and deformation. Intambo kanye nendwangu yokweluka ithengwa kwamanye amazwe. Zilukwa kanyekanye ngesikhathi sokukhiqiza futhi zithola umsebenzi olandelayo njengezinga lokushisa eliphezulu kanye nokubekwa kwengcindezi ephezulu ukuze zithole indwangu eyisicaba ephezulu enamandla. Esikulethayo akuyona nje indwangu, kodwa futhi nesimo sengqondo ngokuphila. Ngaphezu kwalokho, umqulu ngamunye wendwangu ye-shangri-la zebra iyahlolwa ngaphambi kokuthunyelwa.
Isiqinisekiso Sekhwalithi I-Shangri-La Sheer Blinds Fabric For Office
I-Shangri-La sheer blinds (eyaziwa nangokuthi i-sheer blinds) iwuhlobo lwamakhethini okulawula ukukhanya, anamashidi ahambisanayo anama-blade amaningi. Umbala wendwangu ye-Groeve Shangri-La blinds umsulwa futhi ugcwele. Uma ukhetha indwangu ye-Shangri-La blinds, into yokuqala ebamba amehlo abantu imibala yabo ehlanzekile kanye nokucwebezela okugcwele, konke okususelwa kuzintambo nezindwangu ezivela kwamanye amazwe.
Lapho ukhetha indwangu, abathengi kufanele banake zonke izimfanelo zendwangu ye-Shangri-La sheer blinds, futhi ngemva kwalokho ungakhetha indwangu ye-Shangri-La sheer blinds eyanelisayo, ekhululekile, futhi enokwethenjelwa. Kungakhathaliseki ukuthi yiluphi uhlobo oludingayo, amasampuli amahhala ayatholakala ukuze uhlole ikhwalithi bese ukhetha umbala.
Indwangu Eshisayo Yasefekthri Ithengisa Indwangu Kathathu Ye-Shangri-La Roller Blinds Blinds 100% Blackout
Izimpumputhe ze-Shangri-La roller zihlanganisa izikrini zefasitela, izimpumputhe ze-venetian nezimpumputhe ze-roller, okuyimfashini futhi okufushane, ukukhanya kungalungiswa ngokukhululekile, okungaba umthunzi kodwa kungasimbozi indawo. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo.
I-Groupeve shangri-La roller blinds fabrics iphathwa ngendlela engangeni manzi, isikhunta-proof and anti-static treatments-ngemuva kokucubungula okukhethekile, akulula ukubumba nothuli, futhi kulula ukuyihlanza nokuyigcina. Ngaphezu kwalokho, i-semi-blackout kanye nochungechunge olumnyama lwendwangu ye-Shangri-La roller blinds ingasabalalisa ukukhanya okubonakalayo endlini, kunciphise ukusetshenziswa kwamandla okukhanyisa.Izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
Ubulula Nobuhle be-Shangri-La Fabric 3m Ububanzi
Izimpumputhe ze-Shangri-La zihlanganisa izikrini zefasitela, izimpumputhe ze-venetian kanye nezimpumputhe ze-roller, okuyimfashini futhi emfushane, ukukhanya kungalungiswa ngokukhululekile, okungaba umthunzi kodwa kungasimbozi indawo. Izindwangu ze-Groeve Shangri-La ziphathwa ngemithi engangeni manzi, isikhunta ne-anti-static-ngemuva kokucubungula okukhethekile, akulula ukubumba nothuli, futhi kulula ukuyihlanza nokuyigcina; Ngaphezu kwalokho, uchungechunge olumnyama nolumnyama lwezimpumputhe ze-Shangri-La lusakaza ukukhanya okubonakalayo endlini, kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla okukhanyisa. Zombili zingavimba ngaphezu kwama-95% emisebe ye-ultraviolet eyingozi futhi zivikele ifenisha yasendlini.
Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela umkhuba wemfashini yamazwe ngamazwe.
Indwangu Eyimpumputhe Kathathu ye-Shangri-La Roller Yezindawo zokudlela
Izindwangu ze-Groeve shangri-La roller blinds zenziwe nge-polyester engu-100%, ububanzi buyi-3m futhi ziphathwa ngemithi engangeni manzi, isikhunta kanye ne-anti-static-ngemuva kokucubungula okukhethekile, akulula ukubumba nothuli, futhi kulula ukuyihlanza. futhi sinakekele; I-shangri-La roller blinds fabrics nayo inganciphisa ngempumelelo imisebe yelanga engena ekamelweni, ngaleyo ndlela inciphise ukusetshenziswa kwamandla kwama-air conditioners nezinye izinto zokusebenza.